Abuta (အဘူတာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Abuta (အဘူတာ)
Abuta (အဘူတာ) ကဘာလဲ။
အဘူတာ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Abuta ကို အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အစာခြေလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ (ဥပမာ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အစာအိမ် နာခြင်း)
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ဥပမာ အအေးမိခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ခြင်း)
အရေပြား ပြဿနာများ (ဥပမာ ဝက်ခြံ၊ အနာ၊ မီးလောင်နာ၊ အပူလောင်နာ၊ ယားယံခြင်း၊ ဖျားနာပြီး အကွက်ထခြင်း၊ strep bacteria ဘက်တီးရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပျို့အန်ခြင်း)
ဆီးလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ (ဥပမာ ဆီးအိမ်နဲ့ ကျောက်ကပ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း)
Abuta ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Abuta ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ဆေးပင် ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အဘူတာ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်မှာအောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Abuta နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
အဘူတာ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Abuta ဟာ ဘယ်လောက် လုံခြုံစိတ်ချရပါသလဲ။
Abuta ကို ခွဲစိတ်မှုမပြုခင် နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီး ရပ်သင့်ပါတယ်။
အဘူတာ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Abuta ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အဘူတာ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
အဘူတာ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဆေးပြား (သို့) ဆေးလုံးထဲမှာပါတဲ့ Abuta မှုန့် ၁-၂ ဂရမ်ကို
Abuta ကို ၄:၁ တင်ချာရည်အဖြစ် 2-4ml ကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Abuta ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အဘူတာ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Abuta ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား၊ ဆေးတောင့်တွေမှာပါတဲ့ Abuta အခေါက်
Abuta. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-267-abuta.aspx?activeingredientid=267&activeingredientname=abuta. Accessed March 11, 2017.
ဆေးကုလားမ (Tragacanth Gum Herb)